Philips 273B9, yekutarisa inosimudzira teleworking [Kuongorora] | Gadget nhau
Philips anoenderera mberi achishanda neMMD mukusimudzira nekusimudzira maPC monitors emarudzi ese. Mune dzino nguva, monitors ane zviyero pakati pe 24 uye 27 inches ari kuwana yakakosha mukurumbira nekuda kwekukwira kwekuita teleworking, uye apa ndipo patinobva kuActualidad Gadget kuti ikubatsire kusarudza nzira yakanaka.
Tinounza patafura yekuongorora iyo nyowani Philips 273B9, yakazara HD yekutarisa ine USBC yekubatanidza iyo ichakubatsira iwe simba teleworking. Tichatora zvakadzama kutarisa kune ayo maitiro ehunyanzvi uye kunyanya izvo zvatakasangana nazvo panguva yekuyedzwa kwakaitwa.
2 Kunaka kwekufona
4 Huzhinji hwekubatana uye hunoshanda
Mune ino kesi Philips akasarudza dhizaini dhizaini, Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti iyo femeni inowanzo kuvezwa nekugadzirwa kwemidziyo ine zvidiki zvidiki maererano nedesheni kana zvigadzirwa, izvi zvinogara zvichitipa musiyano wekuvimbika, kuramba uye kudzikama kune dzimwe nharaunda dzebasa.
Mune ino kesi, Philips akasarudza matte matema epurasitiki uye mafuru-akaderedzwa mafuremu kumusoro nemativi. Hazvina kudaro kuchikamu chezasi uko mamwe ma sensors atichataura nezvayo gare gare ari.
Tenga Philips 273B9 kuongorora> LINK
Nheyo yakaenzana yakakura iyo inofamba uye inoratidzira diki diki, yakanakira peni geeks. Iyo keypad iri pazasi kurudyi uye ine yakapusa HUD system izvo zvinoratidzwa pachiratidziri patinodzvanya yega yega. Kubatana kumashure kwese kuri munzvimbo imwechete.
Weight: 4,59 Kg isina stand / 7,03 Kg ine stand
Iyo simendi inosungirirwa nyore nyore nenzira yebhatani rinotsvedza. Kana tangoiswa tinokwanisa kuisa tariso kwatinoda. Tine tarisiro inotaridzika zvakanaka mune chero nzvimbo yebasa uye kunyangwe muhofisi yedu "yekumba".
Iyo yakakosha mbiru yekunyaradza kweiyi yekutarisa yakavakirwa pachokwadi chekuti rutsigiro rwayo ruchatibvumidza isu kuti tigadzirise hurefu kusvika pamamirimita zana nehafu kutwasuka. Iwo matauriro anotibvumidza kuti isu tigadzirise iyo yekutarisa yakatenderedza 90 degrees uye kusvika pamadhigirii makumi matatu kutsika kuda kuita zvine mutsindo.
Kune chikamu chayo, hwaro hwayo hunofamba, inozvishandukira nyore nyore, imwe mbiru yakakosha kana tichida kuve nemonitor mukona yetafura nekuti tinoshanda panguva imwe chete nezviri mupepa fomati pamwe nedhijitari.
Kune chikamu chayo, munzvimbo inonamira yechigadziko tichawana mana masikuru ayo anozotishandira pakuisa rutsigiro nekuenderana VESA, mune mamwe mazwi, matanho echinyakare ari nyore kuwana chero nguva yekutengesa. Zvisinei, takawana kushamisika. Tora nemutengo wakanakisa paAmazon (link).
Aya screws akapfupika-kure, saka isu tinogona chete kusanganisa iyo VESA adapter ine zviyero chaizvo, Mune mamwe mazwi, hatizokwanisi kutora mukana weadapter yematanho akati wandei nekuti aya screws haana kureba zvakakwana. Isu takagadzirisa dambudziko iri nekuwana masikuru ehukuru hwakaenzana asi hwakareba.
Iye zvino tinoenda kune yakasarudzika tekinoroji, uye isu tiri pamberi pechiona MMD IPS LCD ine 27 inches (68,6 masentimita). Iyo ine matte inopesana-nekuratidzira kupfeka iyo inoita kuti ive yakanaka kune ese mamiriro ezvinhu, zvakare inodzivirira fogging ne25%, zviri pachena kuti yekutarisa yehondo iyo ichave yakanatswa nyore.
Nezve chisarudzo, Philips akasarudza ye1080p (Yakazara HD) ine yepakati yepamusoro yekuzorodza mwero inomira pa iyo 75 Hz, izvi zvinoita kuti tiwane 4ms kunonoka (pfumbu kusvika kuchena) uye nekudaro haina kunyanya kugadzirirwa kutamba, kunyange iri yepakati, saka kuzviita pane ino tarisa kunenge kuri kunakidza.
Nezve kupenya, inoramba iri pakati nepakati manhamba e 250 nits. Isu tine 98% yeiyo sRGB mbiri uye 76% kubva kuNTSC.
Isu tinoenderera mberi nekujekesa iyo PowerSensor, hurongwa hwema sensors pasi pePhilips logo iyo ichatibvumidza kuti tione patinenge tiri pamberi pechiono uye kuona nguva yekupinda "yekurara" modhi pasina chikonzero chekuti tizvitaure, izvo zvinozonyanya kudzikisira kushandiswa kwesimba, kunyanya munzvimbo hofisi. Isu takaona kuti inoshanda zvinopfuura kururamisa, inogadziriswa muhurefu uye inogadziriswa.
Huzhinji hwekubatana uye hunoshanda
Nezve visualization, isu tatova pachena kuti nzvimbo yebasa yakawedzera kupfuura kufukidzwa, zvisinei isu tine zvakawanda zvekutaura nezvazvo. Uyeste Philips 273B9 yakagadzirirwa kukurira mhando dzese dzematambudziko, uye inoratidza mukubatana kwayo.
Audio mukati / Audio kunze
2x USB 3.1 ine Kuendesa Simba
Bhokisi racho rinosanganisira chiteshi cheHDMI, DisplayPort uye USB-C ine DisplayPort 3.0 tekinoroji. Nhasi uno mabhuku mazhinji emabhuku anouya akananga neUBSC chiteshi uye hapana chimwe chinhu, sekuMacBook Pro 16 ″ yatakashandisa kuyedza, uye uyu wanga uri mufaro mukuru.
Iyo USB-C chiteshi chemuongorori ichapa inosvika ku60W yekuchaja kune iyo laptop iyo yatiri kubatanidza, panguva imwechete iyo iyo inogamuchira mufananidzo mune yakazara HD resolution. Nekudaro, icho chinhu hachisi pano, isu takavimbisa kuti iyo Philips 273B9 inoshanda sechiteshi cheHUB, kuti tikwanise kubatanidza keyboard yedu uye mbeva yakanangana ne USB yekutarisa kuti ishandise notibhuku, uye zvakare batanidza chero chero mhando yekuchengetedza yakawanda.
Zviripachena kuti isu takatarisana ne "kurwa" yekutarisisa, yakagadzirirwa kukunda mamiriro akasiyana asina kumira munzvimbo chero ipi zvayo, isina kupenya zvakanyanya mune chero chinhu, asi ichipa kuunganidzwa kweanoshanda ayo akaoma kuenderana mune mamwe maonitere. Mhedzisiro iwo mutengo uyo, kunze kwekurambidzwa, uri kure nemhando yepasi. Kunyange zvakadaro, Kana isu tichifunga nezvekuti inoshanda seUSB-C HUB, iyo inopa 60W kubhadharisa kune iyo laputopu uye ine SmartErgoBase, zvinoita senge inopfuura yakanaka mari.
Unogona kuiwana pane yepamutemo webhusaiti ye Philipskana zvakananga kuAmazon kubva ku285 euros.
Kubatanidza kwakawanda kwemarudzi ese kumashure
SmartErgoBase kutibvumidza yakanaka kushandisa nzvimbo
Yakanyatsokodzera pani, yakafanana nePhilips
Zvichida zvakare zvine hungwaru dhizaini
Inoda kumwe kumisikidzwa kuti utore mukana weiyo USB-C HUB
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Philips 273B9, Monitor iyo inowedzera teleworking [Analysis]
Chromecast neGoogle TV, ongororo, mutengo uye maficha